कति हुन्छ मुख्यमन्त्रीको तलब ? - EAAWAJ (इ-आवाज)
कति हुन्छ मुख्यमन्त्रीको तलब ?
काठमाण्डौः केहि महिनाअघि स्थानीय निर्वाचन र अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । समानुपातिक तर्फको थोरैको मात्रै मतपरिणाम सार्वजनिक हुन बाँकी छ । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको मतपरिणाम सबै सार्वजनिक भैसकेको छ ।
जसमध्ये प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । एमालेले १६५ सिट मध्ये ८० सिटमा विजय हात पारेको छ । त्यस्तै दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र भएको छ । उसले ३६ सिटमा विजय हात पारेको छ । नेपाली कांग्रेस तेस्रो पार्टी बनेको छ । उसले २३ सिटमा विजय हात पारेको छ । त्यस्तै राजपाले ११ र संघीय समाजवादी फोरमले १० सिट जितेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका १, नेपाल मजदूर किसान पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १ र स्वतन्त्र १ जना निर्वाचित भएका छन् ।
प्रदेशसभातर्फ नेकपा (एमाले)ले का १६८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ७३, नेपाली कांग्रेसका ४१, संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका २४, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका १६, स्वतन्त्र ३, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका २, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, नेपाल मजदूर किसान पार्टी १ जना निर्वाचित भएका छन् ।
नेपालको संविधानले उल्लेख गरे अनुसार देश ३ तहको संरचनामा जाँदैछ । यसपछि यी संरचनालाई विधिवत रुपमा संस्थागत हुनेछ ।
अहिलेको संविधान अनुसार ७ वटा प्रदेश रहनेछन् । जसमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० र समानुपातिकतर्फ २ सय २० गरि कुल ५ सय ५९ जना प्रदेशसभाका सदस्य हुनेछन् । बहुमत ल्याउने पार्टीले प्रदेशको बागडोर सम्हाल्न पाउनेछ अथवा उसैले सरकार गठन गर्नेछ । प्रदेश सञ्चालन मुख्यमन्त्री गर्नेछ ।
मुख्यमन्त्रीको तलब भत्ता, सेवा सुविधा
सबैको मनमा एक किसिमको जिज्ञासा रहेको छ । नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेका मुख्यमन्त्रीहरुको सेवा सुविधा र तलब भत्ता कति होला ?
मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिक स्वरुप ६४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सँगसँगै पोसाक सुविधाबापत प्रत्येक वर्ष १८ हजार, अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च स्वरुप ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री स्वदेशमा भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ३ हजार रुपैया र विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रतिदिन २ सय ५० अमेरिकी डलर पाउनेछन् । ७ वटै मुख्यमन्त्रीका लागि १५ लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा समेत गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयका लागि १२ जना कर्मचारीहरु रहनेछन् । जसमा प्रमुख स्वकीय सचिव, सह-स्वकीय सचिव, उप-स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक, लेखा सहायक रहेनछन् । त्यस्तै २/२ जना सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी राख्न पाउनेछन् ।
← देउवाजीले अव राजीनामा दिएर जय नेपाल भन्दै घर जानुपर्छ : एमाले
एसीसी यु-१६ क्रिकेट : समूह चरणको अन्तिम खेलमा आज नेपालले म्यानमारसँग खेल्दै →